Homeसमाचारसोनिका रोकायवाट किन अलग भइन् रेखा राई ? खुलाइन् यस्तो कारण (भिडियो हेर्नुहोस्)
December 11, 2020 admin समाचार 8969
भ्वाइस अफ नेपालमा राम्रो प्रस्तु’ती दिएर आफ्नो नाम च’लाउन सफल गायक सा’जन लामा अहिले सामाजिक सञ्जा’लमा त्यती देखिन्नन् । उनी अहिले केही आफ्ना ब्य’क्तिगत काममा ब्यस्त भएका का’रण सामाजिक सञ्जा’लमा ब्यस्त हुन नपाएको ब’ताएका छन् । त्यस्तै मोडल तथा युट्युवर सोनिका रो’कायसंग भिडियो निर्माणमा स’हयोगी भएकी रेखा राई अहिले आफ्नै यु’ट्युवमा लागेकी छन् ।
सोनिका रोकायको ‘द सोनिका शो’ मा स’हभागी भइरहेकी उनी अहिले सोनिका’वाट छुट्टीएकी छन् । सोनिकासंग मिलेर एक वर्ष सम्म काम गरेकी रेखा लक’डाउन पछि पनि उनी सोनिकासंग बझागं पुगेकी थिइन् । अहिले उनीह’रुबीचमा समस्या भएको बताइएको छ । उनले सोनिकाको कार्यक्रममा एंगल प’रिवर्तन भएका कारण आ’फुसंगै काम गर्न नसकेको बताएकी छन् ।
पहिला भिडियोमा रा’खिने सामग्री र अहिले ‘सोनिका शो’मा राख्ने कार्यक्रम फरक भएका का’रण आफु सोनिकावाट अल’ग्गीएको बताइन् । उनले पहिला सोनिका विना केही सोच्न पनि स’केको थिइन् तर अहिले सोनिकावाट अलग भएर आएपछि आफुले पनि केही गर्नु पर्छ भनेर काठ’माडौ फर्किएको बताइन् ।
उनी लामो समय सम्म बझा’गं बसेर गाउँले जिवन पनि सिकेको बताएकी छन् । तर लकडा’उनका कारण बझागं गएर धेरै कुरा सिकेको र सोनिकाले पनि धेरै कुरा सि’काएको बताइन् । ‘अहिले त पक्का बुहारी भएकी छु उनले भनिन्, सबै काम सिकेकी छु ।‘सोनिका शो’ छोडेपनि सोनि’कासंगको सम्ब’न्धमा भने कुनै समस्या नभएको बताइन् ।
उनले फेरी पनि ‘सोनिका शो’ को का’र्यक्रम परिवर्तन भए र सोनिकाले बोलाए आफु जाने बताएकी छन् । ‘पहिलो ‘सोनिका शो’ मा रमा’इलो सामग्री राखि’न्थ्यो तर अहिले अलि सिरियस खालको सा’मग्री राख्न थालियो । मलाई रमाइलो मन पर्छ तर सिरि’यस काम गर्न मलाई अहिल समस्या भयो त्यही भएर का’ठमाडौ फर्किए’, उनले भनिन् ।-इताजा खबरबाट
भ्वाइस अफ नेपालमा राम्रो प्रस्तुती दिएर आफ्नो नाम चलाउन सफल गायक साजन लामा अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यती देखिन्नन् । उनी अहिले केही आफ्ना ब्यक्तिगत काममा ब्यस्त भएका कारण सामाजिक सञ्जालमा ब्यस्त हुन नपाएको बताएका छन् । त्यस्तै मोडल तथा युट्युवर सोनिका रोकायसंग भिडियो निर्माणमा सहयोगी भएकी रेखा राई अहिले आफ्नै युट्युवमा लागेकी छन् ।
‘सोनिका शो’ छोडेपनि सोनिकासंगको सम्बन्धमा भने कुनै समस्या नभएको बताइन् । उनले फेरी पनि ‘सोनिका शो’ को कार्यक्रम परिवर्तन भए र सोनिकाले बोलाए आफु जाने बताएकी छन् । ‘पहिलो ‘सोनिका शो’ मा रमाइलो सामग्री राखिन्थ्यो तर अहिले अलि सिरियस खालको सामग्री राख्न थालियो । मलाई रमाइलो मन पर्छ तर सिरियस काम गर्न मलाई अहिल समस्या भयो त्यही भएर काठ’माडौ फर्किए’, उनले भनिन् ।
संक्र’मितको घरमै नि:शुल्क एम्बुलेन्स लिएर पुग्छ अब युवासंघ, यि नम्बरमा सम्पर्क गर्नु’होला
May 12, 2021 admin समाचार 6381
युवा संघ नेपाल लुम्बि’नी प्रदेश र युवा संघ नेपाल बाँकेले कोरोना संक्रमित बिरामिको लागि मंगलबार देखि बाँकेमा निस्शु’ल्क एम्बुलेन्स संचा’लनमा ल्याएको छ । मंगलबार नेपाल’गन्जमा युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदे’शका अध्यक्ष किशोर थापाले एम्बुलेन्स’को चापी
February 21, 2021 admin समाचार 7225
काठमाडौ नेपाली बजारमा बिहिबार सुनको मूल्य ह’वात्तै घटेको छ । बुधबार प्र’तितोला ८९ हजार ८०० रुपैंयामा कारोबार भएको सुनको मुल्य आज तोलामा ५०० रुपैंयाले घटेर प्र’तितोला ८९ हजार ३०० रुपैंयामा कारोबार हुने सुनचाँदी व्यवसाय महा’संघले
May 10, 2021 admin समाचार 6070
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (243669)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (230955)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (229192)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (228206)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228079)